Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch mukota yekupedzisira maererano neIDC | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch mukota yekupedzisira maererano neIDC
Apple haisati ichitaurira yepamutemo yekutengesa manhamba eiyo smartwatch yayo uye izvi isu tinotenda hazvizoshanduke panguva ino. Chaizvoizvo ndechimwe chinhu chatisinganzwisise kuti nei chakavanzwa nekuti zvidzidzo zvakawanda zvemusika kunyangwe CEO wekambani nguva dzose vanoti kutengesa kweiyi wachi kwakanaka.
Chero zvazvingaitika, IDC inoburitsa smartwatch uye kunyanya iyo Apple Watch mune hutano hwakanaka. Iyo Apple Watch inosimudza runyorwa rweanotengesa zvakanyanya-zvigadzirwa mumakota apfuura Uye kana isu tichifunga nezvekuti iyo modhi nyowani iri padyo, iri yakanaka chimiro.
Tinogona kufungidzira kuti kutengesa kwazvino paApple Watch kusanganisira mitengo inonakidza seiya yatakaona mazuva mashoma apfuura emhando yeNike +, yamutsa musika unoita kunge uri kuwana nguva yakanaka. Kana iko kupfura maroketi asi ichokwadi kuti kufarira mune izvi zvinopfeka kuri kuwedzera.
Mamirioni e3,4 mayunitsi akatumirwa mukati mekota yekupedzisira akachengetedza Apple kumusoro kwechinyorwa uye zvinotarisirwa kuti nekuuya kwemidziyo mitsva ivo vacharamba varipo kwenguva yakareba. Kwete kare kare Tim Cook akadzivirira yakanaka mamiriro ekutengesa uye ikozvino yakasimbiswa neiyi itsva IDC mushumo.
Kune rimwe divi, zvakanaka kuti makwikwi acho asimbiswe nezvigadzirwa zvitsva uye kuti musika uri mupenyu, nekuti neiyi nzira mitengo nezvakanakira iwachi izvi zvinowedzera zvakanyanya. Iyo Apple Watch inoramba ichikura mukutengesa panguva dzino uye Kunyangwe vasiri ivo vepamutemo nhamba, isu tine chokwadi chekuti ivo havasi kutadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch mukota yekupedzisira maererano neIDC
Tora iyi pack ye7 mafomu evanyori chete $ 29
Tim Cook anoti akaunganidza $ 3 miriyoni kuburikidza neTunes yeavo vakawirwa nedutu reHarvey